In la badalayo Dastuurka Ethiopia maxaa ka jira. - Ogaden24 | Ogaden24
In la badalayo Dastuurka Ethiopia maxaa ka jira.
Mar 22, 2021 - Comments off
Ethiopia waxay kuwadda joogtaa Dastuurka JDFI, gaar ahaan qoddobada xeerinaya innay qowmiyaduhu ismaamulaan, luuqadooda ku shaqeeyaan islamarkaana deeganadu shaqadoda u madax bannaanadan. Dastuurka Itoobiya maalinta laysku dayo in la baddalo ama meelaha qaar la taabto, waxaa adkaan doonto in lasii wadda joogo.
Qaylada Axmarada ee ah in Dastuurka la baddalo, waa mid riyo maalmeeda mana arkaysid cidkale oo la qabta aragtida marka laga reebo shaqsiyaad afkaartooda lagu shubay iyo kuwa waji ka raadsanaya iyaga. Dastuurka hadda jira qowmiyadaha Axmaradu ugu horeyso ee EPRDF ku middaysnaa ayaa sigaara uga faa’iidaystay, waxay ku nool yihin oo ay ka shaqaystaan Deeganada kale, halka deegankoda aysan cidna joogin.. Waxay degan yihiin guryhihii awoowyadeen, tollow maxaa kaloo ka maqan oo ay raadinayaan?
Arrimaha qaar waa in meel addag laga istaago.
Madaxwayne kuxigenka Deegankenu wuxuu yidhi: “Haddii Itoobiya middaysan la rabbo inay sii wadda jirto, waa in Dastuurka la baddalo”.. Annagoo ah dadkii u matalayayna waxaan qabnaa haddii Dastuurka la taabto, waxaa adkaan doonto in lasii wadda joogo.